नारायणकाजी भन्छन् : कारिन्दा बनेर पार्टीको प्रवक्तामा बस्नु छैन – Etajakhabar
नारायणकाजी भन्छन् : कारिन्दा बनेर पार्टीको प्रवक्तामा बस्नु छैन
काठमाडौं : नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रवक्ता पद पार्टीको कारिन्दाको पद नभएको बताएका छन् । एपीवान एचडीको कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयसँगको अन्तर्वातामा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । आफूलाई कसैले बाध्य पारेर नभइ र स्वेच्छाले प्रवक्ता पद पद त्याग गरेको पनि उनले स्पष्टिकरण दिएका छन् ।
‘पार्टीबाट राजीनामा दिएको होइन, यो प्रवक्ताको पद ठूलो पद पनि होइन । ७ गतेको हो घटना सचिवालय बैठकमा प्रवक्ताले कस्तो भूमिका खेल्ने कस्तो पार्टीले के लाइन लिने भन्नेमा छलफल भएको थियो’, उनले भने, ‘त्यही बैठका मैले राजीनामा दिएको हो । तर १० एउटा पत्रिकामार्फत् यो कुरा आएको हो ।’
बैठकमा डा. गोविन्द केसीको अनसन र आन्दोलनबारेमा पनि पार्टीमा छलफल भएको उनले बताए । ‘७ गते अगाडि नै पार्टीले उनको जीवन रक्षा गर्ने, पहिलो र दोस्रो वार्ताद्वारा नै समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो’, उनले भने, ‘७ गतेको बैठकमा वार्ता कसरी गर्ने, कुन मुद्दामा गर्ने ? छलफ भएको हो । बैठकमा केसीको आन्दोलनलाई कसरी लिने ? भन्ने पनि कुरा भयो ।’
श्रेष्ठले बैठकमा सरकारलाई असफल बनाउन खोजिएको या केसीको आन्दोलन कसैद्वारा परिचालित हो भन्नेमा पनि छलफल भएको उनले खुलासा गरे । त्यसक्रममा उनले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पनि त्यही दिन छलफल भएको पनि उनले खुलाए ।
आन्दोलनका क्रममा आफूले केसीको समर्थनमा लागेका नागरिक समाजका व्यक्तिहरुदेखि वार्ताकारसँग पनि छलफल गरेको स्वयम् केसीलाई पनि भेटेको प्रसंग उल्लेख गरे । ‘मैले पार्टीको लाइनमै रहेर समस्यालाई सृजनात्मक रूपमा हल गर्न खोजेको थिएँ’, उनले भने, ‘केही नेताहरूलाई प्रवक्ताले यस्तो किन गरे भन्ने पनि लागेको रहेछ ।’
श्रेष्ठले कारिन्दा भएर प्रवक्तामा बस्नुको औचित्य नरहेको पनि बताए । ‘पार्टीले उठ भने उठने र बस भने बस्ने पार्टीको कारिन्दा बनेर प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु भन्दा नबस्दा नै उचित हुन्छ भन्ने ठानेर मैले राजीनामा दिएको हो’, उनले अगाडि भने । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन २४, २०७५ समय: ४:०४:०५